Voninahitra 7: notsapainay ho anao | Androidsis
Honor dia nanao dingana avo lenta tamin'ny Honor 6 Plus, fitaovana iray izay namela fahatsapana tena tsara ho antsika ho an'ny famaranana kalitao sy ny fahombiazany mifanaraka amin'ny terminal avo lenta. ankehitriny ilay sampana Huawei naseho tany Londres ny sainam-pirenena vaovao, ny Manaja 7.
Fitaovana izay kasain'i Honor hametraka ny tenany eo amin'ny tsena eropeana. Ary efa nolazaiko taminareo fa ny fahatsapana voalohany voaray nandritra ny fanolorana ofisialy ny Honor 7 Tsy afaka naneho fiheverana bebe kokoa izy ireo.
1 Honor 7, famolavolana mitohy miaraka amin'ny famaranana kalitao
2 Kitendry arakaraka ny vita
3 Fitaovana avo lenta avo lenta
5 Mpamaky ny dian-tànana: Manararaotra feno ny fampiasa azy ny Honor 7
7 Fahafahana sy vidiny
Honor 7, famolavolana mitohy miaraka amin'ny famaranana kalitao
Raha vao jerena dia misongadina ny fitoviana mazava eo amin'ny Honor 7 sy ny Huawei Ascend Mate 7. Samy mizara endrika mitovy sy famaranana premium ireo finday roa ireo. Ary ny Honor 7 dia manana a tena vy miasa tsara miaraka amina alim-bolo vita amin'ny alimika, manome fahatsapana mahafinaritra amin'ny fikitihana.
Miorina mafy ny fanamboarana, mahamarika izany ny hatevin'ny telefaona, izay mahatratra 8.5 mm, zavatra be loatra ho an'ny mpampiasa sasany, bebe kokoa raha raisintsika izany Honor 7 dia matevina 2 milimetatra noho ny Huawei P8.
Ny sisiny somary boribory dia mamela ny Honor 7 ho bebe kokoa mahazo aina mihazona. Be dia be ny telefaona, ara-dalàna rehefa heverinao fa 143.2mm ny haavony, 71.9mm ny halavany, ary 8.5mm ny haavony. Mazava ho azy fa ny lanjany 157 grama dia mahatonga azy tsy ho sarotra ny mandray azy na eo aza ny habeny. Ny fiheverana voalohany taorian'ny fitsapana ny Honor 7 tamin'ny famelabelarana azy dia ny fanirian'ny mpanamboatra telefaona finday misy famaranana kalitao. Ary nahomby izy.
El Manomeza voninahitra mpamaky rantsantanana 7 Izy io dia miorina eo aorian'ny alimo alim-baravaran'ny terminal, eo afovoany sy eo ambanin'ny fakantsary ihany. Ny tapany ambony sy ambany amin'ny fonony aoriana an'ny Honor 7 dia vita amin'ny plastika, na dia aseho amin'ny fikasihana aza izy io dia tsy mahasosotra. Eo no misy ny antennas an'ny telefaona, ary amin'ny alàlan'ny fampiasana plastika, ny tambajotra Bluetooth sy WLAN dia tsy hanelingelina ny fifandraisana GSM an-telefaona.
Toy ny ao amin'ny P8 Lite, ny eo ambanin'ny Honor 7 dia natao hampiorenana ny seranana microUSB, mpandahateny mono, ary ny mikrô ho an'ny fiantsoana. Eny, mamaky tsara ianao, mpandahateny mono. Fahadisoana voalohany hitanay. Ho hitantsika ny fitondran-tenany rehefa afaka manao fanadihadiana lalindalina kokoa isika.
Eo amin'ny ilany ankavanana dia hitantsika ny bokotra volume sy ny herinaratra, zavatra mahazatra amin'ny telefaona Huawei. Misongadina a Kasarina kely amin'ny bokotra herinaratra mba hanavahana azy amin'ny bokotra fanaraha-maso.
Honor dia te hitrandraka ny tombony azo amin'ny telefaona hafa. Amin'izany no ahitantsika a bokotra ara-batana amin'ny ilany havia, tena mitovy amin'ny OnePlus 2, izay ahafahanao manamboatra mba hidiranao amin'ireo rindranasa sy fiasa samihafa an'ny Honor 7.
Miaraka amin'ity bokotra ity, Honor dia nanisy slot izay afaka mitazona karatra SIM nano roa, na SIM nano ary microSD. Hevitra tena tiako amin'ny P8 / P8 Lite ary nohararaotin'ilay mpanamboatra. Ny hafa toa an'i Samsung dia efa afaka nianatra ...
Kitendry arakaraka ny vita
Miaraka amin'ny diagonal an'ny 5.2 santimetatra, ny tabilao Honor 7 dia mahatratra ny vahaolana Full HD (1920 x 1080 teboka) noho ny takelaka IPS izay manome maranitra sy mazava kokoa ny sary mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa rehetra. Misy lojika raha jerena ny azy ireo 424dpi.
Ny loko toa maranitra ary ny zoro mijery dia mihoatra ny marina. Ny efijery Honor 7 dia tsy maintsy hosedraina amin'ny tontolo samihafa hahitana ny fomba fitondran-tenany amin'ny andro migaingaina, fa amin'izao dia tena tsara izany.
Asongadino izany ny efijery Honor 7 dia mitentina 73% eo anoloana eo amin'ny fitaovana, misaotra ireo sisiny kely indrindra. Na dia efa nolazaiko taminao aza fa tsara ny loko atolotray ho default, azontsika atao ny manamboatra ny hafanin'izy ireo, zavatra mahazatra amin'ny findain'ny mpanamboatra aziatika.
Farany mariho fa ny efijery an'ny Honor 7 azo alefa sy hidina amin'ny paompy indroa, toy ny fomban'ny KnockOn an'ny LG. Raha fintinina, efijery tsara manome fampisehoana tena tsara.
Fitaovana avo lenta avo lenta
Huawei dia miverina miloka amin'ny vahaolana samirery mba handresena ny Honor 7. Amin'izany fomba izany dia mahita processeur matanjaka isika HiSilicon Kirin 935, SoC valo fotony noforonina tamina atidoha Cortex-A53 efatra tamin'ny 1.5 GHz ary Cortex-A53 efatra hafa izay mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 2.2 GHz.
Ny Mali T-628MP4 GPU -na dia hamela ny lalao na ny fampiharana hifindra moramora. Eny, ity singa fanodinana sary ity dia ambany noho ilay ampiasain'ny Samsung Galaxy S5 koa amin'ny fitsapana fampisehoana dia ho hitantsika fa, ohatra, ny LG G4 na ny Galaxy S6 dia ho haingana kokoa.
Ny orinasa Huawei dia miloka amin'ny batterie 3.100 mAh hanohanana ny lanjan'ireo fitaovana entin'ny sahaniny vaovao. Rehefa dinihina fa ny telefaona Honor rehetra dia misongadina amin'ny fanoloran-tena ambonimbony kokoa noho ny antonony, azoko antoka izany el Manomeza tombony amin'ny fahombiazan'ny bateria 7 ho tsara izany, na dia tsy maintsy miandry ny fanatanterahantsika ny fanadihadiana feno kokoa aza isika. Ny antsipiriany iray tena mahaliana dia ny fampidiran'ny Honor 7 rafitra famerana haingana.
Hisy toerana roa ho an'ny Honor 7: kinova misy RAM 3 GB sy fitehirizana 16 GB ary maodely iray hafa misy RAM 3 GB sy fahatsiarovana anatiny 64 GB. Ireo telefaona roa ireo dia manolotra fampisehoana tsara, mihazakazaka haingana, na dia tsikaritro aza ny tara kely na kely aza tamin'ireo maodely roa indraindray. Na dia ny trosa amin'ity olana ity aza dia ny EMUI mahazatra.
Android 5.0 Lollipop dia tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny Honor 7, na eo ambanin'ny interface interface EMUI 3.1. Ity takelaka ity dia tsy manana vatasarihana fampiharana, fa ny efijery samihafa an-trano dia manangona ireo rindranasa napetraka rehetra, ahafahantsika mandamina azy ireo amin'ny alàlan'ny lahatahiry.
Amin'ity lafiny ity, tsy misy fanoherana, lasa zatra haingana amin'ity rafitra ity ianao. Efa nolazaiko fa ny Honor 7 dia mamaly haingana ny fihetsitsika, na dia hitantsika aza indraindray a fanemorana kely, ohatra, rehefa manokatra ny safidy multitasking
Misy ihany koa ny antsipiriany tena mahasosotra ao amin'ny safidy multitasking: ny fanangonana ny rindranasa efatra isaky ny efatra dia tena tsy mahazo aina ny misafidy izay rindranasa tiana hosokafana haingana. Rehefa avy nanandrana azy vetivety aho dia hitako fa mora kokoa ny mitady mivantana ilay rindranasa hampiasa maody multitasking.
Mpamaky ny dian-tànana: Manararaotra feno ny fampiasa azy ny Honor 7
Ny lamaody biometrika dia nanjary lamaody. Mihabetsaka ny mpanamboatra manolotra an'ity karazana vahaolana ity ary ny Honor kosa tsy ho latsa-danja. Ahoana ny fomba fiasan'ny mpamaky sidina Honor 7? toy ny landy.
Tsotra dia tsotra ny fanaingoana, mila manaraka fotsiny ny tutorial izahay handaminana ny dian-tongotra hanombohana ny fampiasana ny sensor ho an'ny dian-tànana Honor 7.
Ny antsipiriany iray tena tiako dia ny mpamaky ny rantsantanana Honor 7 tsy vitan'ny hoe mamaha ny efijery; koa afaka mandray antso isika, maka sary sy horonan-tsary, vonoy ny fanairana na zahao ny takelaka fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fanaovana fihetsika tsotra amin'ny rantsan-tànanao amin'ilay mpamaky. Ohatra, tsy mila mitazona ny rantsan-tànana fotsiny isika eo amin'ilay mpamaky ny dian-tànana mba hampavitrika ny fakantsary. Safidy hitako fa tena ilaina ary mampitombo ny fahafaha-manamboatra sensor biometrika ity.
Ny fakantsary lehibe an'ny Honor 7 dia misy a Sarina Sony IMX230, sensor 20 megapixel manolotra fampisehoana tena tsara. Mariho fa ny fakantsary Honor 7 dia mampifangaro rafitra iray izay manasaraka ny jiro miditra ho sary roa misaraka ary mampitaha azy ireo, ahafahana mifantoka haingana.
Misy karazany maro karazana Safidy, afaka maka sary panoramic, mampandeha maody HDR, maody mipoaka ... Ny fanolorana ny Honor 7 dia tsy ny toerana mety indrindra hanaovana fitsapana tsara ny fakantsary ny sainan'ny mpamokatra vaovao, fa ny fiheverana voalohany dia tena tsara.
Ary tsy afaka manadino azy isika Fakan-tsary mialoha 8 megapixel, mihoatra ny ampy ho an'ny sarin'ny tena na ny antso an-tsarimihetsika kalitao.
Araka ny efa fantatsika, ny 7 GB Honor 16 dia hamely ny tsena eropeana mandritra ny volana septambra amin'ny vidiny tena mahaliana: 349 euros. Araka ny efa nolazaiko anao dia tsy maintsy miandry isika mandra-pahatanterako ny famakafakana bebe kokoa an'ity telefaona vaovao ity, saingy amin'izao fotoana izao ireo fahatsapana fa nandao ahy ny Honor 7 dia tsy tokony ho tsara kokoa.
Ny mpanamboatra aziatika dia manao zavatra tsara tokoa ary raha mitazona izany hafainganam-pandeha izany dia mety hiafara amin'ny benchmark mazava any Eropa. Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba ny Honor 7?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 7, fahatsapana voalohany taorian'ny fampisehoana azy tany London
Toa tsara izany noho ny famolavolana vy, toa tsara kokoa ny fihazonana azy satria misy curvature kely izy io, tiako ny safidy microsd, mamaly haingana, manana bateria lehibe izy, tsy miloka amin'ny QHD, tsy ao aoriana ilay mpandahateny ary azo antoka ny vidiny. Etsy ankilany, tsy tiako ny tsy misy ny bokotra, fa mivoaka ny fakan-tsary (na dia azo ahitsy aza ny fonony), heveriko fa ny zana-kazo sy ny sisiny dia azo nampiasaina bebe kokoa